अस्पतालमा शरीर-लगाएको क्यामेराको फाइदाहरू OMG समाधानहरू
अस्पतालमा शरीरमा परिणत क्यामेराको फाइदा
स्वास्थ्य देखभाल सुविधाहरूमा शारीरिक-लगाएको क्यामेरा प्रयोग
विज्ञान र टेक्नोलोजीले विगत केहि बर्षहरुमा संसारलाई पूर्ण रुपमा ढाकेको छ। हामी धेरै नयाँ आविष्कारहरू देख्न सक्छौं जुन हाम्रो आराम र समर्थनको लागि प्रत्येक दिन उत्पादन गरिन्छ। प्रत्येक व्यक्ति टेक्नोलोजीका यी आविष्कारहरूले घेरिएको हुन्छ। सुरक्षा र निगरानी एक दिन गम्भीर चुनौती भएको छ। हामीले सुरक्षा समस्याहरूको ठूलो संख्यामा समाधानहरू देख्यौं। आज प्रयोग गरिएको सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिएको आइटमहरू बडी वर्न क्यामेरा हो।
शारीरिक Worn क्यामेरा विशेष क्यामेरा हो कि व्यक्तिलाई समर्थन र ब्याकअप प्रदान गर्दछ। यो प्रयोगकर्ताको शरीरसँग जोडिएको छ र यसले प्रयोगकर्ताले देखेका चीजहरू रेकर्ड गर्दछ। शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू अब एक दिन शीर्ष ट्रेन्डहरू लिइरहेका छन्। किनकि ती धेरै प्रभावकारी र लाभदायक भएका छन्।
शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू आधारभूत रूपमा पुलिस विभागले पुलिस अफिसरहरूलाई उनीहरूको अनुसन्धान, सोधपुछ र निगरानीमा प्रयोग गर्नका लागि प्रयोग गरेको थियो। तर अब, ती अन्य क्षेत्रहरूमा पनि प्रयोग गर्न सुरु भयो। तिनीहरूको उपयोगको उत्तम उदाहरण स्वास्थ्य सेवा सुविधा हो।
स्वास्थ्य देखभाल सुविधाहरूमा शरीरले लगाएको क्यामेरा प्रयोग:
स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूले धेरै कामका लागि शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू प्रयोग गर्न शुरू गरेका छन्। यो प्रवृत्ति केही वर्षको लागि शुरू गरिएको छ। मुख्यतया, शरीर-लगाएका क्यामेरा यी सुविधाहरूको प्रवेश द्वारमा निगरानी र रेकर्डिंगको लागि प्रयोग गरिदैछन्। यस उद्देश्यको बावजुद, यी क्यामेरासँग धेरै अन्य अनुप्रयोगहरू छन्। यी क्यामेराको एक महत्त्वपूर्ण उपयोग मानसिक अशक्तता भएका बिरामीहरूको व्यवहार अनुगमन गर्नु हो। शरीरमा लगाएका क्यामेराहरूले स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका बिरामीहरू र परिचारकहरूप्रति असभ्य व्यवहार पनि कम गरेको छ। यसले अस्पताल र क्लिनिकहरूमा हिंस्रक घटनाहरूमा ठूलो कमी आएको छ। शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू नर्सहरूमा उनीहरूको सीपहरू परीक्षण गर्न र उनीहरूको गल्ती औंल्याउन पनि प्रयोग गरिन्छ। समग्रमा, हामीसँग शरीरमा लगाएका क्यामेराहरूको धेरै अनुप्रयोगहरू हुनसक्दछन्, तर हाम्रो विचारमा यो स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूमा प्रयोग हुनै पर्दैन किनकि यसले अस्पतालका स्टाफका साथै बिरामीहरू र उनीहरूका नजिकका व्यक्तिहरूको गोपनीयतालाई बाधा पुर्‍याउँछ। यी सबै पक्षहरूमा विस्तृत हेराइ हेरौं र राम्रो नतीजामा आउनुहोस्।
आउनुहोस् हामी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाहरूमा शरीरमा लगाउने क्यामेराहरूका केही प्रयोगहरू हेरौं।
सुरक्षा र निगरानी:
सुरक्षा भनेको सबैभन्दा कठिन चुनौती हो जुन मानिसहरूलाई अहिले एक दिन सामना गर्नुपर्दछ। त्यसकारण, तिनीहरू यस उद्देश्यका लागि विभिन्न प्रकारका सुरक्षा ग्याजेटहरू प्रयोग गर्दछन्। जब हामी शरीरमा लगाउने क्यामेराहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं, स्वास्थ्य सेवाहरूमा उनीहरूको प्रदर्शनमा एक नजर राखौं। स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूले तिनीहरूको सुरक्षा र निगरानी उद्देश्यको लागि शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू प्रयोग गर्न शुरू गरेका छन्। सामान्यतया, यी क्यामेराहरू सुरक्षा गार्डहरूको शरीरसँग जोडिएका हुन्छन् जुन मुख्य ढोकाको प्रवेशद्वारमा उभिन्छन्। तपाईंले सोचिरहनुपर्दछ कि किन उनीहरूले यो उद्देश्यका लागि CCTV क्यामेरा प्रयोग गर्नुभएन। तर यदि हामी हेर्छौं, शरीरले लगाएको क्यामेरा प्रयोग गरेर दुई उद्देश्य पूरा गर्दछ र अधिक संख्यामा सुविधाहरू छन्।
सुरुमा, शरीरमा लगाएका क्यामेराहरूले सम्पूर्ण निगरानी प्रदान गर्न सक्दछन् र प्रवेश द्वार पार गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको रेकर्डि .्ग गर्न सक्दछन्। योसँग यसको स्वतन्त्र आन्दोलनको कारणले ठूलो कोण छ। त्यसकारण यसले रेकर्डिंगका लागि ठूलो क्षेत्र कभर गर्न सक्दछ।
दोस्रो, यसले गार्डहरूको ब्यवहार रेकर्ड गर्दछ कि क्यामेरा शरीरमा जोडिएको छ। र नतीजाको रूपमा, ती मानिसप्रति राम्रो व्यवहार देखाउँछन्। यसले ठूलो संख्यामा हिंसात्मक घटनाहरूको संख्या घटाउनेछ। त्यसोभए, हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं कि शरीरमा लगाउने क्यामेराहरू बढी प्रभावकारी छन्।
सार्वजनिक भेला हुने स्थानहरूमा हिंसा एउटा ठूलो समस्या भएको छ। स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सन्दर्भमा पनि यस्तै हो। हिंसा घटनाहरूले सुविधाहरूको प्रतिष्ठालाई ठूलो हदसम्म बिगार्न सक्छ र अन्य बिरामीहरू र परिचारकहरूलाई पनि विचलित गर्न सक्छ। हामी केवल अस्पताल वा सुरक्षाकर्मीहरूलाई जनतामा हिंसा देखाउन अपेक्षा गर्न सक्दैनौं। तर पनि, त्यहाँ धेरै जसो चरम हिंसा बिरामीहरु द्वारा भयो कि अस्पताल को लागी एक समस्या र बिरामीहरु को लागी एक विघटन भयो। यसका लागि हामी शरीरमा लगाउने क्यामेरा प्रयोग गर्दछौं। यी क्यामेराहरू बिरामीहरूप्रति स्टाफको व्यवहार अनुगमन गर्न प्रयोग गरिन्छ। क्यामेरा तिनीहरूको शरीर संग जोडिएको छ, कर्मचारीहरु कोमलता व्यवहार देखाउने कोशिस गर्नेछन्। समान अवस्थामा, यदि कुनै बिरामी वा परिचारकले कुनै हिंसा देखाउँदछ भने, त्यसपछि स्टाफ उनीहरूलाई रेकर्ड भइरहेको छ भनेर भन्न स्वतन्त्र हुन्छन्। यस तरीकाले, शरीरमा लगाएका क्यामेराहरूले स्वास्थ्य सेवा सुविधामा हिंसा नियन्त्रण गर्न ठूलो मद्दत पुर्‍याउन सक्छन्।
चिकित्सक अनुगमन र प्रशिक्षण:
शरीरमा लगाएका क्यामेराहरूको स्वास्थ्य सेवा सुविधामा अर्को प्रभावकारी प्रयोग छ। तिनीहरू जुनियर डाक्टरहरू र उनीहरूका वरिष्ठहरूबाट नर्सहरूको दक्षता निगरानीको लागि प्रयोग गरिन्छ। नर्सहरूलाई तिनीहरूको कामको लागि विशेष पाठ्यक्रमहरू दिइन्छ। तिनीहरूको कर्तव्य छ कि उहाँ बिरामीहरूको हेरचाह गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई औषधि प्रदान गर्नुहुन्छ र उनीहरूको आवश्यकताको पनि हेरचाह गर्नुहुन्छ। तिनीहरू पनि बिरामीलाई सम्हाल्न चिकित्सकहरूलाई मद्दत गर्छन्। नर्सहरूको व्यवहार धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले पहिल्यै छलफल गरिसकेका छौं कि शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू उनीहरूको ब्यबहारको अनुगमन गर्न प्रयोग गरिन्छ। तर उहि समयमा, यो तिनीहरूको कौशलता अनुगमन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ एक वा दुई वरिष्ठ डाक्टरहरू जुन जूनियर डाक्टरहरूको टोली नेतृत्व गर्दछ। तिनीहरूले सजिलै आफ्नो जूनियर निगरानी गर्न सक्छन् र आफ्नो गल्तीहरू औंल्याउन सक्नुहुन्छ। यसले तिनीहरूको जूनियरहरूलाई सजीलो सिकाउन फाइदा दिन्छ।
के शरीरमा लगाएका क्यामेराहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा अनुमति दिन सकिन्छ?
स्वास्थ्य देखभाल वातावरणमा शरीरले लगाएको क्यामेरा टेक्नोलोजी बिरामीहरू र आगन्तुकहरूको गोपनीयताको अपेक्षाको सन्दर्भमा प्रमुख चिन्ताको विषय हो। मेरो धारणामा, यी शरीरले लगाएको क्यामेराको प्रयोग सुरक्षा कर्मचारी र पुलिस अफिसरहरूमा सीमित हुनु पर्छ जुन कुनै साक्षीको बयान वा छानबिनको लागि अस्पतालको सुविधामा आउँदछ। त्यहाँ केहि पीडित र साक्षी अन्तर्वार्ता हुन्छन् जुन प्राय कानुन प्रवर्तन अधिकारीहरु द्वारा स्वास्थ्य सेवा भित्र गरिन्छ। हामी क्यामेरालाई पुलिस र सुरक्षाकर्मीहरूको प्रयोगमा किन सीमित राख्छौं? यसको प्रमुख कारणलाई हेरौं:
स्वास्थ्य देखभाल सुविधाहरूमा शरीर लगाएका क्यामेराको मुख्य नुकसानः
शारीरिक पहिरन क्यामेरा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाहरूमा उनीहरूको प्रयोगबाट धेरै फाइदाहरू छन् तर एकै साथ एक ठूलो बेफाइदा पनि छ जुन क्यामेराले गरिरहेको सबै राम्रा चीजहरूलाई बर्बाद गर्दैछ। त्यो समस्या हो “बिरामीहरूको गोपनीयता ".
स्वास्थ्य सुविधा धेरै जसो मानिसहरूसँग भरिन्छ। यस अवस्थामा, त्यहाँ धेरै छन् कि आफ्नो गोपनीयता हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनन्। तर शरीर-लगाउने क्यामेराहरूको सभ्य संख्याले तिनीहरूलाई त्यसो गर्न दिँदैन। स्टाफका धेरै सदस्यहरूले शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू प्रयोग गर्दा, मानिसहरूलाई आफैलाई बचाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। र हामीसँग हाल कुनै खास कानून र कानून छैन जसले कसैको गोपनीयतालाई अवरोध पुर्‍याउन शरीरले लगाएको क्यामेराको उपयोगलाई समर्थन गर्दछ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यहाँ धेरै बिरामीहरू छन्, जुन एकदम नराम्रो अवस्थामा छ। कर्मचारीले शिक्षण वा व्यवहार अनुगमन उद्देश्यका लागि क्यामेरा प्रयोग गर्न सक्दैन यदि यसले कसैको गोपनीयतालाई हानी गर्दछ भने। यो त्यसपछि अवैध गतिविधि को एक प्रकार बन्छ कि स्वास्थ्य सुविधा को ख्याति क्षति पुर्‍याउँछ र परिचारकहरु र बिरामीहरुलाई दुखी पनि बनाउँछ जुन धेरै खराब चीज हो। त्यसोभए, हामीलाई किन यस्तो प्रकारको ग्याजेटहरू आवश्यक छ कि जसले प्रयोग गर्ने पक्षलाई यसले मद्दत गर्दछ भन्दा बढी क्षति पुर्‍याउँछ? यस कुराले स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूमा शरीरमा लगाउने क्यामेराहरूको पतन निम्त्याउँछ।
यो समस्या कसरी समाधान गर्ने?
आजका स्वास्थ्य सुविधाहरू आफ्ना बिरामीहरूको अपेक्षाहरू अनुरूप छैन। यसको कारण शरीरले लगाएको क्यामेराको उपयोगले स्वास्थ्य सेवा सुविधालाई बिगार्दै छ सीधे परिचारकहरु र बिरामीहरुको गोपनीयता अवरोध गरेर। के हामी यस समस्यालाई समाधान गर्ने माध्यमको साथ आउन सक्छौं?
हाम्रो मुख्य चिन्ताको विषय यहाँ गोपनीयता हो जुन व्यक्ति क्यामेरामा रेकर्ड गरेर विचलित हुन्छ जब कि ऊ यसमा हुन चाहँदैन। यसको समाधान हुन सक्छ। शरीरमा लगाउने क्यामेराहरूको संख्या ठूलो हदसम्म कम गर्नुपर्नेछ। सर्तका आधारमा स्टाफका सदस्यहरूलाई सुविधाको लागि शरीरमा लगाउने क्यामेरा प्रयोग गर्न दिइनु हुँदैन। यो सुविधाको प्रवेश द्वारमा रहेको सुरक्षा कर्मचारीलाई मात्र अनुमति हुनुपर्दछ। नतिजाको रूपमा, क्यामेराको संख्या थोरै हुनबाट रोक्न सकिन्छ जसले गोपनीयता गडबडीको कारकलाई हटाउन सक्छ।
साथै, त्यहाँ वरिष्ठ श्रेणीहरूको विशिष्ट सदस्यहरूको टोली हुनुपर्दछ जुन क्यामेराले बनाएको सबै रेकर्डि .को लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ। तिनीहरूले रेकर्डि theirहरू उनीहरूको नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई निजी राख्नु पर्छ। यस तरिकाले, रेकर्डि। सुरक्षित हुनेछ र यसले आगन्तुकहरू र बिरामीहरूलाई राहत दिन्छ।
त्यहाँ केहि कानूनहरू र कानूनहरू हुनुपर्दछ जुन दुबै पक्षहरूमा सहमत हुन सन्तुलित समाधान प्रदान गर्दछ। त्यसोभए दुबै पक्षले नियमको पालना गर्नेछन्। यसले केही हदसम्म सुविधाको लागि शरीरमा लगाएको क्यामेराको उपयोग खोल्छ र एकै समयमा यसले बिरामीहरूको गोपनीयतालाई बाधा पुर्‍याउँदैन।
अस्पतालमा शरीरमा परिणत क्यामेराको फाइदा पछिल्लो पटक परिमार्जित गरिएको थियो: डिसेम्बर 4th, 2019 by व्यवस्थापक
3772 कुल दृश्यहरू2हेराइ आज